उदीयमान शक्तिको मिलन: के गर्दै छ नेपाल ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती
देउवाले बोलाए निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको मात्रै बैठक, जम्मा भए नेताहरू सानेपामा →
उदीयमान शक्तिको मिलन: के गर्दै छ नेपाल ?
Posted on 30/04/2018 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
नेपालमा परम्परागत शक्तिको प्रभाव बढ्न सक्छ’
काठमाडौँ — २१ औं शताब्दी अब एसियाको नेतृत्वमा रहने ‘भाषा’ लाई पछिल्ला दुई कूटनीतिक घटनाक्रमले आशामा परिणत गरिदिएको छ । चीन र दक्षिण कोरियामा भएको फरक–फरक तर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले यस्तो आशा जगाएको हो । विश्व राजनीतिको नेतृत्व फेरि एक पटक एसियाले लिने सशक्त संकेतका रूपमा यो घटनाक्रमलाई लिइएको छ । केही महिनायता यस क्षेत्रमा अप्रत्याशित कूटनीतिक घटनाक्रम देखा परिरहेको छ । कूटनीतिक भेटघाट र छलफलले तीव्रता पाइरहेको छ । ६ दशकभन्दा अघिदेखि शत्रुवत व्यवहारमा रहेका उत्तर र दक्षिण कोरियाका नेताहरूले संसारलाई नै आश्चर्यमा पारे । दक्षिण कोरियामा नयाँ राष्ट्रपति मुन जे इन आएदेखि नै आकलन गरिएअनुरूप दुई कोरियाली नेताको अंगालोले विश्वलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कैयन् शक्ति मुलुकलाई भने अलमलमा पारिदिएको छ । लगातार आणविक परीक्षण गर्दै अमेरिकालाई आणविक प्रहारको समेत धावा बोल्दै आएको उत्तर कोरियाले अर्को महिनादेखि आणविक परीक्षण नगर्ने घोषणा मात्र गरेन, अब आपसी युद्धसमेत कहिल्यै नगर्ने वाचा दुवैले गरे । जुन अपेक्षाभन्दा निकै अगाडिको विषय थियो ।
यससँगै एसियाकै ठूला र उदीयमान शक्ति मुलुक भारत र चीनले आपसी मतभेद हटाउँदै अप्रत्याशित रूपमा सम्बन्ध सघन पारेका छन् । सहकार्य बढाउँदै लैजाने सहमति गरेका छन् । कोरियाली प्रायद्वीपपछि भारत र चीनबीच यस्तो परिघटना देखा परेको हो । यी दुई घटनाले विश्व राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई समेटेर शक्तिसन्तुलन गर्ने संकेत मात्रै होइन, विश्व नेतृत्वका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको सन्देशसमेत दिएका छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीच पनि यस्तै सकारात्मक सहकार्यको अवस्था आए एसिया साँच्चै अघि बढ्ने अड्कल गर्न थालिएको छ । पछिल्ला दुई घटनाले पश्चिमा शक्तिलाई ठूलो धक्का दिएको हुन सक्छ, जसले उनीहरूको प्रभाव नेपालजस्तो बीचमा रहेका मुलुकमा बढ्न सक्ने आकलन कूटनीतिज्ञहरूको छ ।
यही विषयलाई लिएर परराष्ट्र अधिकारीहरूले अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका छन् । नेपाल यतिबेला दुवै मुलुकको सहयोगमा विकास प्रक्रिया अघि बढाउन उद्यत छ । सरकारले चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गरिने परियोजनाहरूको छनोट गरिरहेको छ भने भारतसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने गरी काम अघि बढाएको छ । दुवैको नेतृत्वले यसै वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीले प्रदीप ज्ञवालीले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी २८ गते नेपाल आउँदै छन् भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण गराउन पनि नेपालले पहल गर्ने भएको छ । दुवै भ्रमणमा नेपालले आफ्नो विकासको छिमेकी मुलुकको सहकार्य खोज्ने छ । भारत र चीनको मिलन अनि नेपालले उनीहरूको सहकार्य खोजीले पश्चिमा शक्तिहरू उपेक्षित हुँदै जाने देखिन्छ । जुन नेपालका लागि राम्रो विषय नहुन पनि सक्छ । तर अहिले त्यही अवस्था देखिएको छ । उदीयमान शक्तिहरू र बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच सहकार्य हुँदा विश्व शक्ति एवं पश्चिमा शक्ति झस्कनु स्वाभाविक हो । उनीहरूलाई यसबाट ठूलो असर पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपि कोरियाली घटनाक्रम भने अमेरिकी पकडअन्तर्गत नै भएको विश्लेषणसमेत गरिएको छ ।
हुन त अमेरिकाले विश्वको शक्ति आफ्नो अनुकूल बनाउने गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यतिबेला एसियामा भइरहेको नयाँ दृश्यलाई नियाल्दै यसमा आफ्नो स्थान खोज्न थालेको पनि देखिन्छ । उनी जति भुत्तेझैं देखिएका छन्, त्यति नै रूप फेर्न सक्ने व्यापारिक गुण भएका व्यक्ति हुन् । अमेरिकीहरू सहज रूपमा शक्तिबाट बाहिर नजाने हुनाले पनि त्यसका लागि यहाँको शक्तिहरूलाई मिलाएर अघि बढ्न चीन उद्यत रहेको आकलन पनि विद्वान्हरूले विभिन्न कोणबाट गरिरहेका छन् ।
पश्चिमा शक्तिले पहिले भारतलाई साथ लिएर चीन घेर्ने नीति लिएका थिए । त्यहीअन्तर्गतको हो– अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको सहकार्य । उनीहरू अहिले त्यो सहकार्यबाट छुटेर चीनसँग दुईपक्षीय पहल सुरु गरिसकेका छन् । जापानले समेत चीनसँग सहकार्यको हात बढाएको अवस्था छ । तर चीनसँग जुन सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ, त्यसमा केही अड्चन भने हुने देखिन्छ । अमेरिका लगायतको पश्चिमा शक्ति लयमा फर्कन निकै अब्बल र अनुभवी रहेकाले पनि अहिले नै एसियाको युग आयो वा आइहाल्छ भनिहाल्न सकिँदैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको सम्बन्ध विकास आफ्नो मुलुकका लागि अस्थायी खपत मात्र होइन भने पश्चिमा शक्तिमाथि अवश्य असहज अवस्था निम्नते देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर दुईपक्षीय व्यापार र बजारका हिसाबले पश्चिमाहरू मारमा पर्न सक्छन् । यी दुई नेताको सम्बन्धमा रसियाले समेत साथ दिए विश्व फेरि दुई ध्रुवमा विभाजित हुनेछ । जसले समस्या झन् टकरावमा परिणत हुँदै जाने र विश्वका अन्य मुलुक दुईतिर विभाजित हँुदै शीतकालीन समयमा फर्कने देखिन्छ ।
यसरी दुई ध्रुवमा विश्व शक्ति बाँडिँदा अमेरिकाको सुपर पावर शैलीमा पनि परिवर्तन हुने अडकलबाजी हुन थालेको छ । यद्यपि, अमेरिकी अर्थतन्त्रमा थोरै मात्र सुधार भए शक्ति क्षीण नहुने अर्को विश्लेषण पनि छ । विश्वका बेस्ट माइन्ड, अपार उर्वर भूमि र प्रविधिले मत्त, सुरक्षा क्षेत्रमा खर्बौं डलर बजेट र विश्व सुरक्षामा पहुँच रहेको अमेरिका सहज रूपमा पछि पर्न नसक्ने बुझेका भारत र चीनले सहकार्यमा जोड दिएका हुन् । यता सहकार्यसँगै अमेरिकासँगको उनीहरूको दुईपक्षीय सम्बन्ध र प्रभाव पनि अर्को पाटोका रूपमा रहने हुनाले बाहिर विश्लेषण गरिएजस्तो सहज छैन ।
चीनमा विकसित घटनासँगै दलाई लामाले आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्ने र त्यसलाई कामको केही जिम्मेवारी दिनेजस्ता कार्यले पनि त्यस्तो विषयलाई पछ्याउँछ । पश्चिमा प्रभावमा रहेको भारतमा आन्तरिक रूपमा मोदीको आलोचना सुरु भएको छ । सञ्चार माध्यममा मोदीविरुद्ध धारणा आउन थालेका छन् । मोदीको चीन भ्रमणले भारतको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड दिन सक्ने अड्कलबाजीसमेत भएका छन् ।
सन् २०१९ मा हुने आम निर्वाचनको खपतका लागि मोदीले चीनसमक्ष विशेष सम्बन्ध राखेको तर्कसमेत बाहिर आएको छ । भारतको संसद्मा वर्तमान सरकारको चीन नीति र भ्रमण’bout व्यापक बहसको संकेत देखिएको छ । भारतमा स्वतन्त्रतापछि नेहरूले लिएको नेतृत्वको अवस्थामा झैं पछिल्लो पटक मोदीसँग जोडिएर चीन विषय भारतको बहसमा आएको छ ।
चीनलाई यस क्षेत्र (दक्षिण एसिया) मा प्रवेश नै दिन हुँदैन भन्ने शक्तिको वर्चस्व भारतमा अझै रहेकाले मोदीलाई सहज भने छैन । चीन पुग्ने निर्धारित अर्को कार्यक्रम हुँदाहँुदै अचानक भ्रमण तय गर्दै मोदीले अनौपचारिक रूपमा चीनकै अर्को सहर उहानको भ्रमण गर्नु र भेटघाट हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यस क्षेत्रका साना मुलुकले चीनलाई भारत र भारतलाई चीन देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् । कतिपयले व्यक्तिगत स्वार्थसमेत । यी दुई शक्तिकै मिलनले त्यो विषयमा भने फरक अवस्था सिर्जना गरिदिन सक्छ । चीनले सार्कमा समेत चासो राख्दै आफूलाई सदस्यसरहको हैसियत मागिरहेको अवस्थामा यसले केही प्रगति हुन सक्ने देखाएको छ । बेलायत र चीन तथा अन्य युरोप र चीनको सहकार्यमा पनि नाटकीय रूपमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ ।(कान्तिपुर )
पुराना पेजहरु महिना छान्नुहोस् अक्टोबर 2021 (31) सेप्टेम्बर 2021 (37) अगस्ट 2021 (40) जुलाई 2021 (32) जुन 2021 (37) मे 2021 (32) अप्रील 2021 (19) मार्च 2021 (32) फ्रेवुअरी 2021 (37) जनवरी 2021 (31) डिसेम्बर 2020 (36) नोभेम्बर 2020 (26) अक्टोबर 2020 (4) सेप्टेम्बर 2020 (30) अगस्ट 2020 (26) जुलाई 2020 (26) जुन 2020 (11) मे 2020 (14) अप्रील 2020 (7) मार्च 2020 (30) फ्रेवुअरी 2020 (50) जनवरी 2020 (55) डिसेम्बर 2019 (69) नोभेम्बर 2019 (49) अक्टोबर 2019 (55) सेप्टेम्बर 2019 (59) अगस्ट 2019 (62) जुलाई 2019 (67) जुन 2019 (73) मे 2019 (46) अप्रील 2019 (14) मार्च 2019 (21) फ्रेवुअरी 2019 (55) जनवरी 2019 (67) डिसेम्बर 2018 (71) नोभेम्बर 2018 (38) अक्टोबर 2018 (28) सेप्टेम्बर 2018 (55) अगस्ट 2018 (52) जुलाई 2018 (63) जुन 2018 (77) मे 2018 (72) अप्रील 2018 (73) मार्च 2018 (58) फ्रेवुअरी 2018 (60) जनवरी 2018 (64) डिसेम्बर 2017 (75) नोभेम्बर 2017 (74) अक्टोबर 2017 (73) सेप्टेम्बर 2017 (71) अगस्ट 2017 (85) जुलाई 2017 (87) जुन 2017 (72) मे 2017 (47) अप्रील 2017 (66) मार्च 2017 (55) फ्रेवुअरी 2017 (53) जनवरी 2017 (54) डिसेम्बर 2016 (43) नोभेम्बर 2016 (81) अक्टोबर 2016 (73) सेप्टेम्बर 2016 (88) अगस्ट 2016 (89) जुलाई 2016 (86) जुन 2016 (77) मे 2016 (83) अप्रील 2016 (88) मार्च 2016 (114) फ्रेवुअरी 2016 (110) जनवरी 2016 (85) डिसेम्बर 2015 (81) नोभेम्बर 2015 (76) अक्टोबर 2015 (94) सेप्टेम्बर 2015 (95) अगस्ट 2015 (97) जुलाई 2015 (93) जुन 2015 (92) मे 2015 (100) अप्रील 2015 (106) मार्च 2015 (99) फ्रेवुअरी 2015 (60) जनवरी 2015 (58) डिसेम्बर 2014 (96) नोभेम्बर 2014 (106) अक्टोबर 2014 (110) सेप्टेम्बर 2014 (103) अगस्ट 2014 (96) जुलाई 2014 (83) जुन 2014 (95) मे 2014 (89) अप्रील 2014 (110) मार्च 2014 (103) फ्रेवुअरी 2014 (96) जनवरी 2014 (109) डिसेम्बर 2013 (100) नोभेम्बर 2013 (90) अक्टोबर 2013 (105) सेप्टेम्बर 2013 (134) अगस्ट 2013 (117) जुलाई 2013 (125) जुन 2013 (110) मे 2013 (121) अप्रील 2013 (130) मार्च 2013 (121) फ्रेवुअरी 2013 (108) जनवरी 2013 (124) डिसेम्बर 2012 (122) नोभेम्बर 2012 (121) अक्टोबर 2012 (119) सेप्टेम्बर 2012 (142) अगस्ट 2012 (159) जुलाई 2012 (161) जुन 2012 (164) मे 2012 (187) अप्रील 2012 (148) मार्च 2012 (177) फ्रेवुअरी 2012 (123) जनवरी 2012 (111) डिसेम्बर 2011 (137) नोभेम्बर 2011 (164) अक्टोबर 2011 (176) सेप्टेम्बर 2011 (174) अगस्ट 2011 (202) जुलाई 2011 (179) जुन 2011 (199) मे 2011 (229) अप्रील 2011 (245) मार्च 2011 (279) फ्रेवुअरी 2011 (250) जनवरी 2011 (252) डिसेम्बर 2010 (183) नोभेम्बर 2010 (138) अक्टोबर 2010 (220) सेप्टेम्बर 2010 (253) अगस्ट 2010 (390) जुलाई 2010 (256) जुन 2010 (210) मे 2010 (220) अप्रील 2010 (166) मार्च 2010 (229) फ्रेवुअरी 2010 (131) जनवरी 2010 (207) डिसेम्बर 2009 (152) नोभेम्बर 2009 (141) अक्टोबर 2009 (103) सेप्टेम्बर 2009 (92) अगस्ट 2009 (157) जुलाई 2009 (130) जुन 2009 (89) मे 2009 (172) अप्रील 2009 (62) मार्च 2009 (50) फ्रेवुअरी 2009 (25) जनवरी 2009 (48) डिसेम्बर 2008 (77) नोभेम्बर 2008 (62) अक्टोबर 2008 (25) सेप्टेम्बर 2008 (21) अगस्ट 2008 (3) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2)